Doorashada dalka Maraykanka oo aan weli lagu kala bixin -
Home News Doorashada dalka Maraykanka oo aan weli lagu kala bixin
Doorashada dalka Maraykanka oo aan weli lagu kala bixin
Natiijada doorashada dalka Maraykanka ee shalay dhacday ayaan weli jirin cid ku guuleysatay oo si rasmi ah loo shaaciyay.
Waxaa weli aysan ka soo bixin natiijooyinkii gobolo muhiim ah oo ay ka mid yihiin Pennsylvania, Michigan, Georgia, North Carolina, Wisconsin iyo Arizona, oo weli tirinta codadka ay ka socoto.
Madaxweynaha ayaa yiri “Xaqiidii doorashadaan waan ku guuleysannay. Laakin sida muuqata, waxaa wali socoto tirinta codadka dhowr gobol oo ah kuwa go’aamin doona natiijada kama danbeysta ah.”
Previous articleBaarlamaanka Hirshabelle oo doortay guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Guddoomiye ku xigeenka koowaad
Next articleGuddoomiye ku xigeenka 2aad ee Baarlamaanka Hirshabelle oo loo doortay Mahad Xasan Cusmaan